Izvo gumi Zvikamu Zve Zvakanyanya Kubudirira, Kubata Email Meseji Kopa | Martech Zone
Nepo email yakafambira mberi zvishoma mumakumi mashoma apfuura neHTML, inoteerera dhizaini, uye zvimwe zvinhu, iko kutyaira kuseri kweiyo inoshanda email ichiri iyo meseji kopi kuti iwe unyore. Ini ndinowanzo gumburwa mumaemail andinogamuchira kubva kumakambani uko ini ndisingazive kuti ndivanaani, nei vakanditumira email, kana zvavanotarisira kuti ndiite zvinotevera… uye zvinoguma nekuzvinyoresa kwangu nekukurumidza sekusaina kwavari.
Ndiri kushanda nemutengi izvozvi kunyora kopi kune akati wandei emaemail avo emaquestion… kunyorera ziviso, email inotambira, onboarding email (s), password reset email, nezvimwe. Wanga uri mwedzi wakanaka wekutsvaga pawebhu uye ndinotenda izvo zvandakafukura zvakakwana nuances kune zvimwe zvinokwikwidza zvinyorwa kuti ndigovane pfungwa dzangu nezvandakawana pano.
Mutengi wangu anga akamirira nemoyo murefu kuti ndipedze basa iri… ndichifunga kuti ndaizovhura gwaro remazwi, ndonyorera kopi yavo, ndigoipa kukambani yavo yekusimudzira kuti vaise papuratifomu yavo. Izvo hazvina kuitika nekuti zvese zvinhu zvinofanirwa kunge zvakanyatsofungidzirwa-uye zvaida tani yekutsvaga. Vanyoreri havana moyo murefu mazuva ano kumakambani anotambisa nguva yavo nekusundidzira kutaurirana kusiri kwekukosha. Ini ndaida kuona chimiro chedu chemaemail ichi chichienderana, chakanyatsofungidzirwa, uye chakanyatsoiswa pamberi.
Chikamu chinyorwa: Ini handisi kuzotaura nemamiriro, dhizaini, kana optimization pano… izvi zvakanangana nekopi yauri kunyora mune yega yega maemail.
Inoshanda Email Kopa Zvinhu
Pane gumi dzakakosha zvinhu zvandakaratidza kunyora inoshanda email kopi. Ziva kuti dzimwe dzadzo ndedzekusarudza, asi iyo odhiyo ichiri kukoshesa seyekunyorera email kupururudza kuburikidza neemail. Ini zvakare ndoda kudzikisira kureba kweemail. E-mail inofanira kunge yakareba sekudikanwa kuti isvike pachinangwa chekutaurirana… kwete zvishoma, kwete zvakare. Izvi zvinoreva kuti kana iri password yekumisazve, mushandisi anongoda kuziva zvekuita uye maitiro ekuzviita. Nekudaro, kana iri nyaya inonakidza, akati wandei zviuru zvemazwi anogona kunge akakodzera kuvaraidza munhu anokunyorera. Vanyoreri havana basa nekupururudza sekureba sekunge iro ruzivo rwakanyatso nyorwa uye rwakamurwa kupenengura nekuverenga.
Nyaya Yenyaya - Yako yenyaya mutsara ndiyo inonyanya kukosha kana uchifunga kuti kana kwete anyorese achavhura yako email. Mamwe matipi ekunyora anoshanda ehurukuro mitsara:
Kana yako email iri otomatiki mhinduro (kutumira, password, nezvimwewo), ingotaura izvozvo. Muenzaniso: Yako password reset reset chikumbiro che [chikuva].
Kana email yako ichidzidzisa, bvunza mubvunzo, sanganisira factoid, shandisa kuseka, kana kutowedzera emoji iyo inotarisisa kune iyo email. Muenzaniso: Nei 85% yedhijitari shanduko chirongwa ichitadza?
Musoro wepamberi - mazhinji masisitimu uye makambani haape zvakanyanya kufunga kune preheader zvinyorwa. Aya ndiwo mavara akaratidzirwa ayo vatengi veemail vanoratidza pasi penyaya yako yenyaya. Iwo anowanzo kuve mashoma ekutanga mitsara yezvirimo mukati meemail, asi neHTML neCSS unogona kunyatsogadzirisa preheader zvinyorwa uye uvanze mukati memuviri weiyo email. Wepamberi unoita kuti iwe ugone kuwedzera pane yako chidzidzo mutsara uye kubata vaverengi kutarisisa, uchiwedzera kuvanyengedza kuti vaverenge iyo email yese. Semuenzaniso. Kuenderera mberi nedhijitari shanduko yemusoro wenyaya pamusoro, wangu wekutanga musoro anogona kunge ari, Tsvagiridzo yakapa zvikonzero zvitatu zvinotevera nei mapurojekiti edhijitari ekushomeka mukati memabhizinesi.
mukana - Ndima yako yekuvhura inogona kunge iri yako yepamberi kana iwe unogona kutora mukana weiyo yekuwedzera nzvimbo yekuwedzera kukwazisa, kunyatsoisa matauriro, uye kumisikidza chinangwa chekutaurirana. Muenzaniso: Muchikamu chino, tichagovana tsvagiridzo yakazara yakaitwa mukati memakambani Fortune mazana mashanu anonongedzera kuzvikonzero zvitatu zvakajairika zvekuti mapurojekiti edhijitari ekushandurwa anotadza mukati mebhizinesi.
Kuonga (zvingasarudzika) - Kana iwe uchinge waisa toni, iwe ungangoshuvira kusarudza sarudzo muverengi. Muenzaniso: Semutengi, isu tinotenda zvakakosha kuti tigovane ruzivo rwakadai kuti tiwedzere kukosha kwatinounza kuhukama hwedu. Ndatenda nekutenda kwako kune [kambani].
muviri - Remekedza nguva yevanhu nekupfupikisa uye neunyanzvi kupa ruzivo kuti usvike kune icho chawataura pamusoro. Heano mashoma matipi…
Shandisa kuumba zvishoma uye zvinobudirira. Vanhu vanoverenga akawanda emaimeri pane nhare mbozha. Ivo vangangoda kupurura kuburikidza neemail kutanga uye kuverenga misoro, wobva wachera zvakadzika kune izvo zvirimo. Misoro yakapfava, mazwi akashinga, uye mapoinzi ebullet anofanirwa kukwana kuti avabatsire kutarisisa nekutarisa pane iyo kopi yavanowana inonakidza.
Shandisa Graphics zvishoma uye zvinobudirira. Mifananidzo inobatsira vanyoreri kuti vanzwisise uye vachengete ruzivo rwauri kupa nekukurumidza pane kuverenga zvinyorwa. Funga nezve kutarisa pachati chati pane kuverenga mabara mapfumbamwe uye kukosha ... iyo chati inoshanda zvakanyanya. Graphics haifanire kuve inokanganisa, kana kusununguka, zvakadaro. Hatidi kutambisa nguva yevaverengi.
Chiito kana Chipo (sarudzo) - Udza mushandisi zvekuita, nei kuzviita, uye nguva yekuzviita. Ini ndinokurudzira kwazvo kuti iwe ushandise bhatani rerimwe rudzi nemurairo pariri. Muenzaniso: Kana iwe uri kuronga yako inotevera yedhijitari shanduko purojekiti, ronga yemahara yekutanga yekutangisa musangano ikozvino. [Purogiramu Bhatani]
Feedback (sarudzo) - Bvunza uye upe nzira yekupa mhinduro. Vanyoreri vako vanofarira kutererwa uye panogona kuve nemukana webhizinesi kana iwe uchikumbira mhinduro yavo. Muenzaniso: Wakawana ruzivo urwu rwakakosha here? Pane here imwe nyaya yaungade kuti tiongorore uye tipe ruzivo pamusoro payo? Pindura kune ino email uye utiudze!
Resources (sarudzo) - ipa yakawedzera kana imwe ruzivo inotsigira kutaurirana. Ruzivo urwu runofanirwa kuve rwakanangana nechinangwa chekutaurirana. Mune ino kesi iripamusoro, inogona kuve yekuwedzera, inoenderana mablog mablog awakaita, mashoma ezvinyorwa pamusoro wenyaya, kana izvo chaizvo zviwanikwa zvinotaurwa muchinyorwa.
batanidza - Ipa nzira dzekutaurirana (dandemutande, zvemagariro, kero, foni, nezvimwewo). Rega vanhu vazive kwavanogona kubatana newe uye nekambani yako pasocial media, yako blog, yako nhamba yefoni, kana kunyangwe nzvimbo yako chaiyo.
Chiyeuchidzo - Udza vanhu manyorerwo avakaita uye vape nzira dzekusarudza kana kushandura zvaunofarira zvekutaurirana. Iwe unogona kushamisika kuti mangani maemail akasarudzwa mukati mavanhu, saka vayeuchidze kuti vakawedzerwa sei kune yako email rondedzero! Muenzaniso: Semutengi wedu, iwe wakasarudzwa mune aya matsamba. Kana iwe uchida kubuda kana kugadzirisa zvaunofarira zvekutaurirana, tinya pano.
Kubatana ndiko kwakakosha mune yako email mamiriro uye kuteedzera, saka isa sisitimu yeese yega emaemail ako kuti vanyoreri vazive uye vakoshese yega yega. Kana iwe ukaisa zvinotarisirwa uye ukatodarika ivo, vanyoreri vako vanovhura, tinya, uye vatore matanho zvakanyanya. Izvi zvinotungamira mukubata zvirinani, kutora, uye kuchengetwa kwevatengi vako.
Tags: eemail muviriemail kufona kuitaemail kopiemail kunyoraemail ctaemail kubatanidzwaemail tsokaemail kuumbwaemail mifananidzoemail musoroEmail Marketingemail kuvhuraemail pinduraemail chengetedzoemail kukwazisaemail zvikamuemail chinyorwa mutsarapreheader